musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Israel Breaking News » Israel inorambidza vashanyi kubva kunyika nomwe dziri kumaodzanyemba kweAfrica
African Tourism Bhodhi • Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Botswana Kupwanya Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Eswatini Breaking News • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Israel Breaking News • Lesotho Breaking News • Mozambique Breaking News • Namibia Breaking News • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • Zimbabwe Breaking News • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Zimbabwe Breaking News
Kuwedzerwa kweiyo 'dzvuku' rondedzero kwaidiwa nekuda kwekuonekwa nemasayendisiti ekuSouth Africa kweyemhando nyowani yeCCIDID-19 mudunhu rekumaodzanyemba kweAfrica, sekureva kweHofisi yePM.
Hofisi yeMutungamiriri weIsrael yazivisa nhasi kuti South Africa nedzimwe nyika nhanhatu dzemuAfrica dzawedzerwa kuIsrael runyorwa rwenyika 'dzvuku'.
Musiyano uyu - unonzi B.1.1.529 - une "boka renyeredzi risinganzwisisike" rekuchinja, izvo zviri kunetsa nekuti zvinogona kubatsira kunzvenga mhinduro yemuviri uye kuita kuti ipararire, masayendisiti akaudza vatori venhau pamusangano wenhau muSouth Africa.
Zvichitevera musangano, wakaitwa naPrime Minister we Izirayeri Naftali Bennett, nyika nomwe dzemuAfrica - Chamhembe Afrika, Lesotho, Botswana, zimbabwe, Mozambique, Namibia neEswatini - dzakaverengerwa murunyorwa rwenyika "dzvuku", kana nyika idzo maIsrael asingatenderwe kuenda kwadziri, kunze kwekunge vawana mvumo yakakosha kubva kubazi rezvehutano reIsrael.
MaIsrael aidzoka kumusha kubva kunyika idzi aizofanirwa kupedza pakati pemazuva manomwe kusvika gumi nemana ari muhotera yekuvharirwa kana vasvika.
Vashanyi vanobva kunyika dzemuAfrica idzi havazobvumidzwe kupindawo muIsrael, Hofisi yeMutungamiriri weNyika yakadaro.
Izirayeri yakanyora miriyoni 1.3 yakasimbiswa nyaya dzeCCIDID-19 uye vanopfuura zviuru zvisere vakafa kubva pakatanga denda.
Sekureva kweBazi rezvehutano renyika, 57% chete ye IzirayeriHuwandu hwevanhu vanosvika 9.4 miriyoni vakabayiwa zvizere.